I-YOGA, icinezela kwaye iguqula imifanekiso ngokwamaqela kwiifomathi ezahlukeneyo | Ubunlog
I-YOGA, compress kunye nebatch eguqula imifanekiso kwiifomathi ezahlukeneyo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-YOGA Image Optimizer. Yi le Isixhobo sokutshintsha iifoto kwiJPEG, PNG kunye neWEBP, kunye nokucofa ubungakanani befayile ngomgangatho olinganayo. Isixhobo sasimahla nesivulekileyo, esisekwe kwisixhobo somgca wokuyalela we-YOGA.
Umva we-YOGA usebenzisa ilayibrari yePillow Pillow ukuguqula imifanekiso ibe yiPNG, JPEG okanye iWebP. Sebenzisa ithala leencwadi Guetzli UGoogle ukuvelisa iifayile zeJPEG, ezingama-20% ukuya kuma-30% amancinci kunokusebenzisa yiblpeg. Amathala eencwadi UZepflipng y yewebwebp IiGoogle zisetyenziselwa ukwandisa ezinye iifomati zemifanekiso. Isixhobo somgca wokuyalela sikwaxhasa ukuguqulwa kwemodeli ye-3D kunye nokusebenza usebenzisa ithala leencwadi Uncedo.
1 Iimpawu ngokubanzi ze-YOGA Image Optimizer
2 Faka i-YOGA Image Optimizer kwi-Ubuntu
2.1 Ukuhamba ngephakheji yePlppak
2.2 Sebenzisa ipip3
2.2.1 Khupha ngaphandle
3 Ukusetyenziswa ngokusisiseko kwe-YOGA ukusuka kwisiphelo sendlela
Iimpawu ngokubanzi ze-YOGA Image Optimizer
Isiphelo sangaphambili se-YOGA sibonelela kulula ukuyisebenzisa ujongano lomzobo ukwenza ukuguqulwa komfanekiso kunye nenkqubo yokwenziwa kweGnu / Linux kunye neWindows.
Iya kusivumela vula ibhetshi yemifanekiso, ubonise iithonjana zabo, igama kunye nobungakanani befayile yokufaka, kunye negama lokuphuma kunye nefomathi yefayile.
I-YOGA Image Optimizer ixhasa iifomathi ezahlukeneyo njengegalelo, kunye Unako ukuvelisa iifayile zeJPEG, zePNG kunye nezeWebhu (Zombini ngelahleko kwaye ngaphandle kwelahleko).
Ngaphambi kokucofa ku 'Lungiselela' thina izakuvumela ukuba ukhethe ifomathi yemveliso kwaye usete inqanaba loxinzelelo kumfanekiso ngamnye.
Siza kuba nenkxaso yemisonto emininzi. Siza kukwazi setha ukuba zingaphi ii-CPU cores oza kuzisebenzisa.
Unikeza a Imo emnyama.
Ipateni yemveliso ngokwezifiso
Faka i-YOGA Image Optimizer kwi-Ubuntu
Kwi-Gnu / Linux, le software inokufakwa kwifayile yePlppak okanye usebenzisa i-pip3.
Ukuhamba ngephakheji yePlppak
Ukuba usebenzisa Ubuntu 20.04 kwaye awunayo le teknoloji efakwe kwikhompyuter yakho, ungaqhubeka Isikhokelo ukuba ugxa wakhe ubhale kule bhlogi kwithuba elidlulileyo ukuyenza ikwazi.
Xa ungafaka Iiphakheji zeplppakKuya kufuneka uvule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye usebenzise oku kulandelayo faka umyalelo:
Emva kofakelo, sinako fumana isiqalisi senkqubo kwimeko yemizobo.
Ukuba le nkqubo ayiqinisekisi, ingasuswa ngokulula ukusebenzisa lo myalelo ulandelayo kwi-terminal (Ctrl + Alt + T):
Kulabo abangazithandiyo iiphakheji zePlppak, banethuba lokwenza njalo Sebenzisa ipayipi3. Nokuba olu khetho, SUKWENZA indlela emfutshane yokwenza isicelo Ukuyiqala kwidesktop.
Kuqala, siza kuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye kuyo siza kwenza lo myalelo ulandelayo faka iilayibrari ezifunekayo:
Emva koko sinako faka ipakeji yesicelo usebenzisa lo myalelo:
Njengoko benditshilo apha ngasentla, iphakheji yombhobho ayinakho ukufikelela ngqo kwisicelo. Ngesi sizathu Kuya kufuneka usebenzise lo myalelo ulandelayo ukuze uqalise kwisiphelo sendalo kwaye wenze ifayile yedesktop:
ukuba susa iphakheji yale app, siya kufuna kuphela ukuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye sisebenzise umyalelo kuyo:
Ukusetyenziswa ngokusisiseko kwe-YOGA ukusuka kwisiphelo sendlela
Ukongeza ekusebenziseni imeko yemizobo, endicinga ukuba ayinanto ingako ukuyichaza, sinako nathi Sebenzisa i-terminal ukuphucula imifanekiso yethu. Eyona ndlela ilula yokwandisa umfanekiso ukusuka kwisiphelo kukusebenzisa lo myalelo ulandelayo:
Xa ifomathi yemveliso ingachazwanga kwisiphelo sendlela, i-YOGA ivelisa umfanekiso kunye nefomathi efanayo nomfanekiso wokufaka. Yi-PNG, i-JPEG kunye ne-WEBP kuphela exhaswa njengegalelo, xa ifomathi yemveliso ingachazwanga ngokucacileyo.
Ifomathi yemveliso inokuchazwa kusetyenziswa ifayile ye- Ukhetho lokhetho lwefomathi:
Ezi fomathi zilandelayo ziyaxhaswa:
imvelaphi: Oku kungagqibekanga. Ifomathi yokuvelisa iya kufana nomfanekiso wokufaka.
autoIfomathi yemveliso ikhethwe ngokuzenzekelayo. I-YOGA iya kuvelisa i-PNG ukuba umfanekiso wokufaka usebenzisa ukungafihli, kungenjalo uya kuvelisa i-JPEG.
png: ivelisa umfanekiso wePNG.
jpeg: ivelisa umfanekiso weJPEG.
iwebhu-Yila umfanekiso weWEBP olahlekileyo.
webpl: Yenza umfanekiso weWEBP ongalahlekiyo
Le nkqubo ikwavumela yenza ubungakanani kwakhona kwimifanekiso ngokukhetha-ukukhetha kwakhona:
Kule meko, ukuba ububanzi nokuphakama kunexabiso elifanayo, akufuneki sichaze zombini.
I-YOGA iyakusivumela setha umgangatho ofunekayo weefayile zeJPEG kunye neWebP ezinokuveliswa ngokhetho -Umgangatho wepeg y -Umgangatho wewebhu. Olu khetho luthatha inani eliphakathi phakathi kuka-0 (iifayile ezisezantsi ezisezantsikunye ne-100 (iifayile ezikumgangatho ophezulunjengeparameter:
Ukuba ungumsebenzisi we-Gnu / Linux, olu lukhetho olunomdla lokwandisa imifanekiso yakho, ekwasimahla kunye nomthombo ovulekileyo. Inga wazi ngakumbi ngale nkqubo kwi iphepha lewebhu okanye kwi Indawo yokugcina kwiGitHub yeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-YOGA, compress kunye nebatch eguqula imifanekiso kwiifomathi ezahlukeneyo
IPipeWire 0.3.3 ifika ngoPhuculo lweNkxaso, iiFixes, kunye nokunye
IPostgreSQL ineengxabano nomntu wesithathu ozama ukubhalisa uphawu lwentengiso eYurophu naseMelika.